मनोरञ्जन | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
तीज सरल र सहज रुपमा मनाउनुपर्छ: संञ्चारकर्मी बुढाथोकी
काठमाडौं । नेपाली नारीकोहरुको महान पर्व हरितालिका तीज आउन केही दिनमात्र बाँकिछ । तीज नजिकिदै गर्दा नेपाली हिन्द नारीहरुरु रातो पहिरनमा सजिएर माईत घर पुगेर
अनमोल बने आइमार्स् मोवाइल ब्राण्ड एम्बेस्डर
काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीद्वारा उत्पादित आइमार्स् मोबाइलले नेपालका चर्चित युवा अभिनेता अनमोल केसीलाई ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ओपल मल्टिनेशनल कम्पनि र अभिनेता
श्रीमानलाई झुक्काएर प्रेमीबाट गर्भाधान, यस्तो छ रहस्य
रुस । रुसको राजधानी मस्कोमा एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ एकजना महिलाले आफ्ना पतिलाई छक्याएर ब्वायफ्रेण्डको विर्यबाट गर्भधारण गरेकी छिन् । समाचार अनुसार टेष्टट्युब प्रविधिबाट गर्भाधारण गर्नका
संजिवनीको आवाजमा नयाँ नेपाली गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
भदौ २०, काठमाण्डौ । भारतीय गायिका संजिवनीकाे सुन्दर अावाजमा नयाँ नेपाली गीत सार्वजनिक भएकाे छ । ‘मेराे माया’ बाेलकाे उक्त गीतकाे म्युजिक भिडियाे युटुबमार्फत सार्वजनिक भएकाे हाे । नेपाली सांगीतिक
राजधानीमा भदौ २२ गते तिज महोत्सव हुँदै
भदौ २०, काठमाण्डौ । स्वदेश तथा विदेशमा कुशल रुपमा कार्यक्रम संयोजन गरिसकेको जनप्रिय इभेन्ट म्यानेजमेन्टको आयोजनामा तिज विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रम २०७५ हुने भएको छ । हाम्रो चाडपर्व हाम्रै शैलीमा मनाऔँ,
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम हामीले पक्कै सुनेको हुनु पर्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइन आधुनिक बिज्ञानका एक प्रसिद्द बैज्ञानिक हुन्। उनको “थेवरी ओफ रिलेटीभिटी” एक प्रसिद्द फिजिक्स किताबको रुपमा आज हामीले अध्ययन गरिरहेका
कलाकार तथा पत्रकार कँडेल प्रबल जनसेवा श्री विभूषणद्वारा विभूषित
काडमाण्डौ, १९ भदौ । इन्द्रेणी कार्यक्रमका संस्थापक तथा संचालक कृष्ण प्रसाद कँडेल प्रबल जनसेवा श्री विभूषणद्वारा विभूषित हुनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रको गौरव एवं नेपाली जनताको हित अभिवृद्धिमा पु¥याएको योगदानको
काठमाडौं । कुनै पनि पुरुष १३ वर्षको उमेरमा पिता बन्न सम्भव होला ? आजकल त यस्ता घटना सुन्न पाइएको छैन । तर बेलायतमा चाहिँ कुनै समय एकजना किशोर १३ वर्षको
दुल्लु । विशेषगरी नेवार समुदायले मनाउँदै आएको लाखेनाच दैलेखमा भने सबै समुदायको साझा पर्वका रुपमा विकास हुन थालेको छ । नेवार समुदायबाहेक अन्य समुदायले समेत पर्व मनाउन थालेपछि सबै समुदायको
आमालाई दिन बनाएको एउटा उपहार, अहिले गर्दे अर्बौंको व्यापार
१९६९ को वर्ष । डिसेम्बरको महिनाको एउटा चिसो रात, दक्षिण हेड्ली, म्यासाचुसेटमा एक १६ वर्षे हाइस्कुल अध्ययनरत केटो माइकल जेम्स किट्रेज आफ्नो घरको भान्सामा बसिरहेको हुन्छ । क्रिसमस आउन लागेको
संस्कृति जोगाउन समर्पित छन् गुरु लक्ष्मीप्रसाद
भक्तपुर । लक्ष्मी गुरु ताकतिङ धँ, ताकतिङ धँ धँ ताकतिङ धँ, ताकतिङ धँ धँ ताकतिङ धिंङ, ताकधिंता कति ताक दिता कता, ख ड्रख धँ धँ तिङ धेलेङ नेवारी परम्परागत बाजा
यसकारण फेरी चर्चामा छिन शाहरुखकी छोरी सुहाना !
काठमाडौं । आफ्ना तस्वीरका कारण चर्चामा रहिरहने सुहाना खान एकपटक फेरि चर्चामा छिन् । सुहाना इन्स्टाग्राममा पनि सक्रिय छिन् र नयाँ नयाँ फोटोहरु पोस्ट गरिरहन्छिन् । यसपटक भने उनी भिडियोका
काठमाडौँ, २४ जेठ : भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएको सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय